रेस्टुरेन्टमा अब सरल ‘अर्डर’, दुई युवाले शुरु गरे ‘सजिलो डाइन डाइनिङ’ – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:४९
२३ असोज, काठमाडौं । रेस्टुरेन्टमा गएर बस्यो, अर्डर लिन वेटर आउँदैन । ढिला गरेर मेनु बोकेर आएका वेटरलाई अर्डर गरेपछि पनि खाना कतिबेला आउने हो ! वेटरलाई भ्याईनभ्याईमा हुन्छन् ।
वेटर कतिबेला आउलान् र खाना अर्डर गरौँला भनेर पट्यार लाग्दो बसाईलाई ध्यानमा राख्दै दुई युवाहरुले ‘सजिलो डाइनिङ’ नामक नयाँ सेवा शुरु गरेका छन् ।
वेटरको आवश्यकता नै नपर्ने गरी एक साता अगाडिदेखि अनुपम गोयल र रिशव जेनले ‘सजिलो डाइन डाइनिङ’ को शुरुवात गरेका हुन् । यसका लागि वेवसाइट लञ्च भइसकेको र अब यो सेवा लिन चाहने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुले सम्पर्क गर्नसक्ने यसका संस्थापक अनुपमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ‘सजिलो डाइन’ मा आवद्ध भएका रेस्टुरेन्टहरुमा पुगेका जो कोहि ग्राहकले क्यू आर कोड स्केनिङ गरेर खानेकुराहरु अर्डर गर्न सक्नेछन् ।
यसले कोरोनाबाट बच्न सतर्कता अपनाउन मद्दत गर्नेछ भने समयको बचत पनि हुनेछ । ‘रेस्टुराँमा पुगेपछि क्यूआरकोड स्कनिङ गरेपछि मेनु आइहाल्छ, त्यसबाट अर्डर गरेपछि वेटरलाई पर्खनु परेन’ अनुपम भन्छन्, ‘यसले समयको बचत त गर्छ नै भीडभाड पनि कम गराएर कोभिडबाट पनि सुरक्षित हुन सजिलो हुन्छ ।’
नेपालमा ठूला होटलहरुले यस्तो अभ्यास गरेपनि सबै होटल रेस्टुरेन्टको पहुँचमा भने पुग्न सकेको छैन । सबैले होटल रेस्टुरेन्ट यो सेवा आफै सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले पनि सबैलाई सहिज होस भन्ने हिसाबले ‘सजिलो डाइन’ शुरु गरिएको उनी बताउँछन् ।
आफ्नै अनुभवले देखाएको बाटो
अनुपम स्नातक अध्ययन गर्दै गरेका युवा हुन् । उनका पार्टनर जेन पनि स्नातक अध्ययन गरिरहेका छन् । स्थायी घर कपिलवस्तु भएका अनुपमले भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको अध्ययन पुरा गरेका छन् । स्नातक तह सकेर स्वदेश फर्किएका उनले स्नात्तकोत्तर तहको अध्ययनसँगै बुवालाई व्यवसायमा सहयोग गरिरहेका थिए ।
एचआर गोयल समूहका अध्यक्ष उनका बुवा सुरेन्द्र कुमार गोयल शिवम् सिमेन्टको समेत अध्यक्ष हुन् । उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यापार समेत गरिरहेको यो समूहको व्यवसायमा उनले बुवालाई सघाउँथे । उनमा आफैले नेतृत्व लिएर केहि गनुएपर्छ भन्ने सोच आउ पछि ‘सजिलो डाइन’ शुरु गरेका हुन् ।
उनलाई यसमा उनका साथी जेनले साथ दिएका छन् । भारतको हैजरामा डिप्लोसम्मको अध्ययन पुरा गरेका जेन पनि अहिले काठमाडौंमै स्नात्तकोर अध्ययन गरिरहेका छन् ।
दुई साथीको कुरा मिले पछि उनीहरुले नयाँ योजना सहित ‘सजिलो डाइन’ शुरु गरेका हुन् । यस्तो योजना चाहिँ कसरी बन्यो त ? भन्ने प्रश्नमा अनुपम भन्छन्, ‘यो कोभिड भन्दा अगाडि नै योजना बनेको थियो, कोभिड पछि त झन सजिलो भयो ।’
‘खाना/खाजा खानका लागि रेस्टुरेन्ट गइरहदा अर्डर गर्नका लागि पनि धेरै समय पर्खर्नु पर्थ्यो, वेटर कति बेला आउँछ’, उनी भन्छन्, ‘अर्डर गर्नका लागि धेरै समय लाग्ने भएकाले पनि यस किसिमको सेवा दिनु पर्छ भन्ने सोच आएको थियो ।’ कोभिड आए उनको योजनामा थप सहज भयो । कोरोना महामारीका बेला कन्ट्याक्ट लेस अर्डर धेरै उत्तम भएका कारण पनि उनले यो सेवा शुचारु गरेका हुन् । यो सबैको रोजाईमा पर्ने उनी बताउँछन् ।